Joojinta ka hor intaan 60 maalmood laga bilaabo taariikhda Gelitaanka-25% qiimaha wadarta guud ee la qabtay.
Ka joojin ka hor 30-60 taariikhda Gelitaanka-40% kharashka wadarta guud ee waqtiga la cayimay.
Ka joojin ka hor 21-30 taariikhda Gelitaanka-50% kharashka wadarta guud ee waqtiga la cayimay.
Ka joojin ka hor 07-21 taariikhda Gelitaanka-75% kharashka wadarta guud ee waqtiga la cayimay.
Ka noqoshada 07 ka hor taariikhda Gelitaanka-100% qiimaha wadarta guud ee la qabtay.
Muuji Muuqaal iyo Bixin ka hor inta aan la gaarin Taariikhda Jadwalka - 100% kharashka wadarta guud ee waqtiga la cayimay waa in la bixiyaa
MUHIIM: Saacadaha kor ku xusan ma ahan kuwo sax ah muddada xafladaha iyo sabti wakhti dheer ah. Si taxadar leh u fiirso in magacyada hudheelada kor ku xusan ay muujinayaan in qiimaha nooceedu ay ku saleysantahay adeegsiga hoteelada, mana aha in la muujiyo in hoyga la xaqiijiyay hudheelada ilaa iyo inta aan ku wargelineyno ciddaas. Haddii ay dhacdo mid ka mid ah hoteelada kor ku xusan aanan heleynin, waxaan ku wareejin doonnaa hoy ku-meelgaar ah oo isku mid ah ama midka xiga ee ugu wanaagsan ee la heli karo waxaana lagu gudbin doonaa farqiga qiimaha (siyaadada / dhimista wax kasta oo khuseeya)
Xusuusin: - Sida ku qoran dardaaranka Dawladda, waxaa lagaa codsanayaa inaad soo saarto dukumiintiga aqoonsiga sawirka sida Shatiga Baaskiil / Kaarka Aqoonsiga / Baasaboorka / marka la eegayo jeegga hoteelka. Waanu qaddarinaynaa iskaashigaaga.
₹1,500.00 - ₹25,768.00 fursadaha Select